မြန်မာ စကားပုံများ - ကောက်နှောင်းလျှင် ဆင်စာ သားနှောင်းလျှင် ကျွန်ရာ
Home » ကောက်နှောင်းလျှင် ဆင်စာ သားနှောင်းလျှင် ကျွန်ရာ	ကောက်နှောင်းလျှင် ဆင်စာ သားနှောင်းလျှင် ကျွန်ရာ
ကောက်စပါးပင်များကို မိုးဦးသင့်လျော်သောအချိန်၌ စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းမရှိ၍ စိုက်ပျိုးချိန် နှောင်းပါက စပါးသီးနှံထွက်ချိန်တွင် လှီလှီကင်းကင်းနှင့် မအောင်မမြင် ဖြစ်သဖြင့် လူတို့ စားသုံးနိုင်လောက်အောင် ဆန်ကောင်းမရတော့ဘဲ ဆင်ကျွေးရန်သာ အသုံးကျတော့သည်။ ထို့အတူပင် အရွယ်ကြီးရင့်မှ မွေးဖွားသော သားသမီးအငယ် အနှောင်းတို့သည်လည်း မိဘ၏ ထူထောင်ပြုပြင်မှုကို ပြည့်ဝစွာမရဘဲ သူတစ်ပါးကျွန်အဖြစ် စေပါးခံရုံမျှသာ ရှိတတ်သည်ဟူ၍ ဆိုလိုသည်။
ကောက်ပင်သည် အသီးအနှံမှည့်ချိန်အထိ ကောင်းစွာရှင်သန်ရန် ရေလိုသည့် အဆင့်၌ လိုသည်၊ မြေစိုစွတ်သင့်သော အဆင့်၌ မြေစိုစွတ်ရန်လိုသည်၊ ခြောက်သွေ့သောအချိန်၌ သွေ့ခြောက်ရန် လိုသည်။ ကောက်နှောင်းသောအခါ ရေလိုသောအချိန်၌ ရေမရ၊ မြေစိုသင့် သောအချိန်၌မစိုဘဲ သွေ့ခြောက်၍လိုအပ်သော အာဟာရ မပြည့်ဝတော့သဖြင့် လှီကင်း ညံ့ဖျင်းရလေသည်။ အသက်အရွယ်ကြီးမှ နောက်ဆုံး မွေးဖွားသော သားသမီးတို့မှာလည်း ရှေးဦးသားသမီးတို့ ကြီးပြင်းလာသဖြင့် ပြုစုကျွေးမွေးရသော တာဝန်များ ကြီးလေးလာချိန်၌ မိဘသည်လည်း အသက်အရွယ် အိုမင်း၍ အလုပ်အကိုင် လျော့ပါးဆင်းရဲလာသည်သာများရာ ထိုအခါ၌ သားသမီးငယ်တို့သည် မိဘ၏ချီးမြှင့်မြှောက်စားခြင်း ခံရခဲလေသည်။ ထို့ကြောင့် များသောအားဖြင့် အမှီအခို အားအင်လျော့ပါးတတ်သဖြင့် ကျွန်ရာသွင်းရုံမျှသာ ရှိတော့သည် ဟု တင်စားဆိုသည်။
အရာရာတွင် လုံ့လ၀ီရိယရှိ၍ အခွင့်ဦးခြင်းသည် တစ်ပန်းသာမြဲဖြစ်သည်။ နောက်ကျ ခြင်းသည် အကျိုးပျက်စီးဆုံးပါးရတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် အချိန်အခွင့်ကို အသင့်မီအောင် အားထုတ်ကြိုးပမ်းသင့်သည့်အတိုင်း နောက်ကျလျှင် ဆုံးရှုံးနစ်နာ ရတတ်ကြောင်း ပုံခိုင်း၍ ဆိုသည်။
နီးစပ်သောစကားပုံများအလာနှေး နွားချေးနှင့် သလဲသာကျန်သည်။အလာကောင်းသော်လည်း အခါနှောင်းသည်။
under က category	no comments yet. Why not leave one?
1,622 views on this proverb	(1 votes, average: 1.00 out of 5)	Print this proverb